Halkan Daawo SAWIRO Ciidanka Dab-demiska Caasimada Hargeysa ayaa Soo Badbaadiyay Neef Geella Oo Ku Dhacay Bullaacad
Tuesday February 13, 2018 - 07:09:08 in Wararka by Wariye Khaliil Barre
Ciidanka Dab-demiska Caasimada Hargeysa ayaa Gurmad Badbaado u fidiyay Neef Geella oo Ku Dhacay God isla markaana ku dhibaataysnaaa Godkaas ama Bullaacadaas, waxaana ciidanka markii lagu soo wargeliyay gurmadkaa badbaado ciidanku isla markiiba ku baxay gurmadkaa, iyadoo badanka ciidanku aanuu ka hawlgelin masiibada dabka oo kaliya balse ciidanka markastaba fidiya wixii gurmad ah.
Hadaba Neefkan geela ah ayaa sida dadweyne goob joog ahi u shegeen ciidanka isaga oo soconaya ku dhacay Bullaacadaas, waxaana lagu soo wargeliyay ciidanka inay wax ka qabtaan, daqiiqado yar kadibna ciidanku wuxuu u baxay hawlglakaa waxaana hawlgal muddo soconayay ciidanka dabdemisku ku guuleysteen inay ka soo saaraan neefkaa godkaas.
Ciidanka ayaa hawlgalkan u adeegsanayay Xaadhkaha Badbaadada Iyo Hal Wiish waxaana ciidanka ugu dambayn ka soo saaray godkaas, kuna guuleystay inuu soo badbaadiyo neefkaa geela ah ee dhibaataysnaa.
Dhankiisa waxaa isna mahadnaq u soo jeediyay odayga lahaa neefkan geela ah waxaanuu aad ugu mahadnaqay ciidanka Dabdemiska caasimada hargeysa ee u soo badbaadiyay neefkiisa waxaanuu dadweynaha sheegay in la garab istaago ciidanka markasta oo hawlgalo ku jiraan.
Maaha Markii u horaysay ee ciidanku dhacdo ama badbaado sameeyo, balse waxaa markastaba ciidanka Dabdemisku ka hawlgalaa masiibooyinka iyo badbaadooyinka dhankastaba, waxaana u dambaysay dhacdadii todobaadkii hore uu ciidanka Dabdemisku saddexda nin ee ku dhacay Bullaacada xaafada Badda Cas uu ciidanku ugu gurmaday kuna soo badbaadiyay.
Warbaahinta Ciidnka Dab-demiska Qaranka.